भोलि फूलमाला लगाएर मेरो भाई निस्किन्छ” – रविका दाई हरिशरण::Dhankuta khabar
भोलि फूलमाला लगाएर मेरो भाई निस्किन्छ” – रविका दाई हरिशरण
काठमाडौं। शालिकराम पुडासैनीको प्रकरणमा न्यूज २४ टिभीका कार्यक्रम प्रस्तोता रवि लामिछाने यतिवेला प्रहरी हि६रासतमा छन् । रविका दाजु हरिशरण लामिछाने, जो चर्चित रेडियो पत्रकार हुन । उनले भाई रविलाई अदालतले न्या*य दिनेमा आफू वि६श्वस्त रहेको सुनाए । बिहीबार राति प्राईम टाईम्स टेलिभिजनबाट प्रशारण भएको कार्यक्रम जनता जान्न चाहन्छन्मा पत्रकार ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै उनले यस्तो दा६बी गरेका हुन् । उनले आफूहरुले रविको पक्षमा नारावाजी गनुपर्छ भनेर हु*लहुज्जत वा समर्थकहरु जम्मा नगरेको पनि जि६किर गरे ।
तर, रविको पक्षमा स्व६तस्र्फूत सडकमा आएका समर्थकहरुको आफ्नो अधिकारको कुरा भन्दै उनले प्र६दर्शन नगर वा सडकमा नआउ भनेर कसरी भन्न सकिन्छ ? भन्दै प्रश्न ते६र्साए । बुधबार राति धमलाको कार्यक्रममा रविको परिवारले यो प्रकरणमा दो६षी भन्दै कि६टानी जा६हेरी दिन खोजेका नेपाल प्रेस काउन्सिलका अध्यक्ष किशोर श्रेष्ठको अन्तर्वार्ता प्रशारण भएको भोलिपल्टै रविका दाई हरिशरण सोही कार्यक्रममा आएका छन् । कार्यक्रमको सुरुवातमै पत्रकार धमलाले हरिशरणलाई तपाई रविजीको नामबाट चिनिन चाहन्छु कि तपाईको आफ्नै पहिचान छ हाम्रो देश नेपालमा ? भनेर ख६रो प्रश्न ते६र्साए ।
जवाफमा लामिछानेले भने,“पहिचान त फरक फरक नै होला । अब दाजुभाई हो । यो पारिवारिक कुरा हो ।”आफूलाई हरिशरण र रविको दाजु दुवै किसिमले आम मानिसले चि६न्ने गरेको पनि उनले स्पष्ट पारे । धमला यत्तिमा रोकिएनन् ? उनले फेरि प्रश्न सोधे–तपाई भरतपुर जानुभयो, त्यहाँका जनताले कसरी चिने ? यो प्रश्नको जवाफमा लामिछानेले भने, “उहाँहरुले एक्ससेप्ट गर्नुभएन, विद्याको हिसाबले रविलाई टेलिभिजनको सेटमा देखिरहेको, अब कतिपय मान्छेले ए होईन पो कि पनि भने । त्यो अब स्व६भाविक छ ।” धमलाले तपाई आज रविजीको पक्षमा उभिनुभएको छ, किन ? भनेर सोधे ।
लामिछानेले आफू रविको पक्षमा उभिनु नैतिक दा६यित्व भएको सुनाए । उनले भने,“आफ्नो भाई कुनै किसिमको मु६द्दा, मा६मिलामा फ६सिसकेपछि, त्यो हेर्नु एउटा अभिभावकको कर्तव्य हो ।”धमलाले तपाईको भाई ग६म्भिर मु६द्दामा फस्नुभयो भनेर सोधेको प्रश्नमा उनले फ६सेको भन्दापनि ग६म्भिर बनाउन खोजिएको टिप्पणी गरे । उनले शालिकराम पुडासैनीले दे६हत्याग गर्नुपनि ग६म्भिर भएको सुनाए । उनले थपे,“तर, जुक प्रकृतिबाट मु६द्दा अघि बढाउन खोजियो, त्यो पनि ग६म्भिर हो ।” यो प्रकरणमा रविको कुनै हात नरहेको जिकिर गर्दै उनले यसमा रविको हात छ भनेर ज*बरजस्ती गर्न खोजिरहेको पनि दा६बी गरे ।
उनले भने,“शालिकरामले रविको संलग्नताको कुरा गर्यो, उसले रविको राम्रो पनि कुरा गरेको छ । नराम्रो पनि कुरा गर्या छ । नाम उसको मु६छियो । आ६रोप लाग्यो उसलाई । तर, अहिलेपनि अ६नुशन्धान भैरहेको छ । जुन भिडियो बाहिरि नि६स्कियो, उसले रेकर्ड गरेको एउटा सर्टेशन पोर्सनमात्रै बाहिरि आएको छ । लिक भएको छ । उसले चार बजेदेखि ६ बजेको अवधिमा, हामी अहिले आएको १३ मिनेटेको भनिएको भिडियोलाई मान्दैनौं ।” अ६नुशन्धानको दौरानमा विभिन्न मानिसहरु संलग्न रहेको सुनाउँदै हरिशरणले आफ्ना सूत्रले बताएअनुसार शालिकरामले झण्डै दुई घण्टाको अवधिसम्म भिडियो रेकर्ड गराएको छ ।
उनले सुनाए,“त्यो रुममा बसेर उसले पटक–पटक गरेर भिडियो बनाएको छ । अहिले बाहिर सार्वजनिक भएको भिडियो त त्यसको एउटा पोर्सनमात्रै हो ।”बाहिर आएको १३ मिनेटको भिडियो त एउटा भागमात्रै भएको उनको दा६बी छ । उनले भने,“उसले आ६रोप लगाउँदा नाम लियो । रविले अहिले मलाई ल६खेट्दै गएर चितवन लगेर, त्यहाँ रुममा लगेर दे६हत्याग बा६ध्य बनायो त भन्या छैन नि । कुनै सन्दर्भमा उसले रविको नाम लियो । होईन, उसले अरुको पनि नाम लिएको छ ।”शालिकरामले भिडियोमा रविको नाम लिएकोले सं६लग्नता देखिएपनि पुष्टि हुनुपर्ने बताए ।
उनले भने,“त्यो एउटा आधार हुनसक्छ, तर प्रमाण हुन सक्दैन् । सँगै काम गर्दा म६नमुटाव भयो होला । त्यो त एउटा स्व६भाविक प्रक्रिया हो ।” पछिल्लो समय रविसँग लिईएको ब६यान र रविसँगै थुनिएका अन्य दुई जनाको पनि बयान लिने काम भएको सुनाउँदै यो प्रकरणमा रविको खासै सं६लग्नता नदेखिएको कुरा आफूहरुको प्रा६रम्भिक जानकारीमा आईसकेको पनि हरिशरणको दा६बी छ । तर, कानूनको ह६बला दिएर जसले पनि दुःख दिनसक्नेतर्फ पनि उनले ध्या६नाकार्षण गराए । देशमा न्या*य न६मरेको उनको विश्वास छ ।
उनले भने,“देशका न्या६यमूर्तिहरुले भोलि भन्नुहुन्छ की रवि क्लि६न छ कि छैन भनेर, म त पूर्ण वि६श्वस्त छु, भोलि फूलमाला लगाएर मेरो भाई निस्किन्छ ।”उसो भए तपाईहरुले अहिले किन जु६लुश निकाल्नुभएको त ? भनेर धमलाले सोधेको अर्को प्रश्नमा उनले आफूहरुले अदालतलाई द६बाब नदिएको स्पष्ट पारे । उनले अघि प्र६ष्ट्याए,“होईन, वि६श्वसनीय वातावरण किन बनेन ? त्यो प्रतिप्रश्न गरौं न हामी । म जु६लुशमा गईँन् । मैले एकचोटी अदालत परिसरबाट बाहिर निस्किँदा दुई पटक मैले आफ्ना सार्वजनिक कराहरु राखेको हो ।
जुलुक स्व६तस्र्फूत गएको छ । त्यसमा मेरो व्यक्तिगत सं६लग्नता छैन् ।”आफूहरु विधिको शा६सन र कानूनी राज्यको प६क्षमा रहेको पनि उनले पटक–पटक वि६श्वास दिलाए । रविले सुरुवातमै यो प्रकरणमा प्रहरी प्र६शासनलाई अ६नुशन्धानको लागि आफ्नो पूर्ण साथ र सहयोग रहन्छ भनेर बोलेको पनि उनले सुनाए । उनले भने,“रविले त ए६डभान्समै भनेको थियो कि यो धरपकड गर्नै पर्दैन्, कहिले बोलाउनुहुन्छ म त्यही दिन आउँछु भनेको थियो । मानिसहरु पनि जु६लुशमा किन आएका छन् ? भन्ने कुरा यसमै केन्द्रित छ । रविलाई दो६षी वा नि६र्दोष कवुल गर्ने कुरा त एउटा प्र६क्रियामा गैसक्यो ।
उसको अ६नुशन्धान भैरहेको छ ।”उनले भी६डतन्त्रले सचेत गराउनसक्ने पनि औंल्याए । उनले थपे,“आम मान्छेले के भनेका छन् भने यो सबै रविलाई फ६साउने प्र६पञ्चभित्रको हो भन्ने कुरा चाहीँ उहाँहरुको मनमा परेको छ ।” यो प्रकरणमा अ६नुशन्धान कतातिर केन्द्रित छ ? यसबाट आफूहरुलाई आ६शंका पै६दा भएको पनि हरिशरणले सुनाए । उनले भने,“अ६नुशन्धान कता केन्द्रित हुनुपर्र्छ भन्नेबारे हामी चाहना त राख्न सक्छौं, तर अदालतलाई हामी प्रभाव गर्न सक्दैनौं ।”
रवि लामिछानेका दाईले भने : “भोलि फूलमाला लगाएर मेरो भाई निस्किन्छ”! (भिडियो सहित)